WARARKA MAY 10, 2006
WAR SAXAAFADEED : Xafiiska Qaramadda Midoobay U qaabilsan Arrimaha Siyaasadda Soomaaliya (UNPOS)
Sen. Coleman oo Aqalka Senateka Maraykanka Hordhigay Qaraar Ku Saabsan Soomaaliya
SOMALI FARA BADA OO LAGU QABTAY LAGUNA XIDHXIDHA DALKA TANZANIA,
Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo ku dhawaaqay Xabad joojin
Maxaa ka soo baxay kulankii Xubnaha la dagaalanka Argagixisada iyo..
Siminaar u furmay Xildhibaanada Baarlamaanka..
C/llaahi Yuusuf oo kulan la yeeshay Hogaamiyaha Wadanka Liibiya..
Warbixin ku saabsan dagaalka ka socda Muqdisho.
Eng. Cali Xasan “Maraakiibta Shisheeye waxay xaq u leeyihiin ilaa iyo 200 oo Mile laakiin..
Iska hor imaad ka dhacay Isgooska Km4 oo.
Wakiilka Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay U qaabilsan Arrimaha Soomaaliya oo Ku baaqay joojinta collaadda ka taagan Muqdisho
Nayroobi, 10 Maajo- Wakiilka gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Mudoobay u qaablisan Arrimaha Soomaaliya, François Lonseny Fall, ayaa maanta ku baaqay joojinta colaadda ka taagan Muqdisho oo maalinteedii affaraad ay maanta tahay, collaadaas oo u dhexaysa miliishiyooyin aad u hubaysan.
“Waxaa aad ii dhibay wararka maalin walba aan helayo lana xiriira dhimashada, dhaawaca iyo qaxa dadka rayidka ah, kuwaas oo la cararaya naftooda,’ ayuu yiri Danjire Fall. “ Wax kasta oo ay sababtu tahayba, colaadani goos gooska ah una dhaxaysa ciidamo aad u hubeysani waxa ay sababtay dhimasho aan loo meel dayin, waxaa ayna baqdin iyo qas ku abuurtey dadkii rayidka ahaa ee ku xayirmey goobaha ay dagaaladu ka dhacayeen. Dadkan hubaysani run ahaantii waxa ay dagaal ku qaadeen dadkoodii iyaga oo isla markaasna caradii ay isu qabeen la tegey waddooyinka magaalada. Sidaa darteed waxa aan ugu baaqayaa mas’uuliyiinta labada jaanib ee is haya in ay joojiyaan colaadda iyaga oo markaasi tixgelinaya burburka dhibaatada leh ee ay u geysanayaan dadkooda. Waxaan la oggolaan karin duqeynta aan loo meel dayaynin ee dadka rayidka ah ee magaalada deggani lagu duqeynayo hubka waaweyn sida hoobiyeyaasha, baasuukaha, qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda.
Danjire Fall waxa uu intaa raaciyey in nabadda ka jirta meelo ka mid ah dalka ay abuurtey rajo in dadka Soomaaliyeed ay markaan ka soo kabsanayaan dhibaatadii socotey muddada dhowr iyo tobanka sanno ah.
“Shan iyo tobankii sanno ee aan soo dhaafney, waa markii ugu horeysay ee aan aragno Baarlamaankii Soomaaliyeed oo shaqeynaya, kaas oo hadda fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo oo u jirta 240 Km oo keliya meesha ay dhibaatadu ka dhacayso” ayuu yir Danjire Fall. “Baahi weyn ayaa dalka loogu qabaa nabadgelyo, sidaasi darteed waa ay adag tahay in muhiimaddeeda la iska indho tiro lana baylihiyo”.
Danjire Fall waxa kale oo uu carrabka ku dhuftey in hay’adaha ku-meel-gaarka ah ee federaaliga ah ee Soomaaliya ay hadda la shaqeynayaan ururka IGAD, Midowga Afrika, iyo bulshada caalamka si markaasi loo diyaariyo qorshaha Nabad ku soo dabaalidda dalka. Haddaba gacan ka hadalka iyo dagaalada ka socda Muqdisho waxa ay ina xusuusinayaan baahida degdegga ah ee loo qabo in la dhammeystiro qorshahani. Sidaa si la mid ah waxa ay ina xusuusineysaa culayska ay arrintaasi leedahay. Si kastaba ha ahaatee arrinta nabad ku soo dabaalidda dalku waa arrin u taalla dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Bulshada caalamku nabadgelyo dusha ugama soo rogi karto dadka.
(*) IGAD – Urur qaabilsan horumarka gobolka kana kooban dalalka Jabuuti, Itoobiya, Eritreeya, Kenya, Soomaaliya, Suudaan iyo Uganda.
Wixii faahfaahin dheeri ah kala soo xiriir Ian Steele, Xafiiska Siyaasadda Qaramada Midoobey ee Soomaaliya, Nayroobi Kenya, e-mail: ian.steele@unon.org
Kabilow bidix: Senator Norm Coleman (R-MN), Senators Russ Feingold (D-WI), Mark Dayton (D-MN)
Senator Norm Coleman (R-MN) oo kaashanaya labada Senator ee kala ah Senator Mark Dayton (D-MN) iyo Senator Russ Feingold (D-WI) ayaa aqalka senate-ka soo dhexdhigay Resolution (qaraar) ku boorinya dawladda maraykanka inay la timaado hab ay ula dhaqanto arrimaha Soomaaliya ama siyaasad cad oo ay dawladda maraykanku kula dhaqanto arrimaha Soomaaliya.
Qaraarkan ayaa ku baaqaya in dawladda maraykanku taageerto shacabka Soomaaliyeed oo sida la wada ogsoon yahay dhibaato iyo fawdo iyo dagaal sokeeye ku jirey ku jirey waqti dheer.
Qaraarka waxaa kale oo uu dawladda maraykanka ugu baaqayaa in ay wanaajiso xiriirka ay la leedahay madaxda siyaasadda ee Soomaalia iyo in dawladda maraykanka ka qayb qaadato kobcinta nidaam dawladeedka Soomaaliya ayadoo taageerayso shacabka Soomaaliya
Senator Coleman oo wakiil ka ah gobolka maraykanka ugu Soomaali badan ayaa qof ahaan hore u balan qaaday inuu Soomaalida danahood cod muhiin ah uga noqon doono Washinton DC taas oo uu ka dhabeeyey.
Intii mudo ahba Soomaalida Minnesota ayaa muujinayey damqasho ay u damqanayaan dhibaatada ku habsatay Soomaaliya sida abaaraha, colaadda sokeeye, amaan la'aanta, dawlad la'aanta, nabaad guurinta ama xaalufinta dalka bad iyo berriba iyo adeeg la'aanta haysata shaqacbka Soomaaliyeed.
Soomaalida Minnesota hadday ahaan lahayeen Culimo, arday, waayeel, dhallinyaro, rag iyo haweenba halgan ayay u galeen sidii ay ugu gurman lahaayeen Soomaaliya wana ugu qaban lahaayeen dadkooda wixii karaankooda ah ayadoo la moodo in dhibaatada sii badanaysa ee ku habsatay Soomaaliya ay isu soo dhoweynayso Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota.
Qaraarka (Resolutionka) sida wadajirka ah ay u soo saareen xubno ka tirsan labada xisbi ee demoqraadiga iyo Jamhuuriga waqtigan ayaa la dhihi karaa iskama iman ee waa guul ay soo hoyiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota juhdi badan ka dib.
ISHA: http://coleman.senate.gov | Tarjumadii: Mahamoud Wardere | mnwardere@yahoo.com | Faafin: SomaliTalk.com | May 10, 06
OGEYSIIS: SOOMAALIDA LONDON:
Waxaa dhamaan dadka Soomaaliyeed ee caddaalada jecel necebna quudhsiga iyo takoorka la ogeysiinayaa in uu dhici doono banaanbax weyn oo lagaga soo horjeedo xukunkii ay Maxkamada Somaliland ku xukuntay gacan ku dhiiglihii sida badheedhka ah u dilay Allaha u naxariistee Khadar Cismaan Dhabar. Banaanbaxan waxa uu dhacayaa Bishan May 13-keeda 3:00 pm taasoo ah Sanad Guuradii Koowaad ee ka soo wareegtay markii Marxuumka lagu dilay Magaalada Hargeysa. AKHRI....
Qaxooti somaliyed oo fara badan ayaa lagu xidh xidhay dalka Tanzania, qaxootigan soo galay dalka Tanzania ayaa boqolaal kamida xabsiyada la dhigay kadib marki bishan horanteedi lagu qabtay magaalooyinka Carusha iyo xuudadka dalka Tanzania iyo Kenya u dhaxeya, qaar kalana lagu qabtay magalada Dar es salaam iyagoo ku dhumanaya guryo Somaliyeed.
Madaxa police ka magalada Dar es salaam Mr Alfred Tibeygana ayaa saxaafada u sheegay in dadkaasi la qabqabtay ayagoo kasoo talaabay xududada, wuxuu ku daray in dadka la xidhay ay kamid yihiin laba dumara. Alfred Tibeygana wuxuu kaloosheegay policeku inay marki hore ku daba jireen Niman burcada oo dhacay Bank NMB lacag 150m (Tz Sh) ah, kadibna ay lakulmeen dadka faraha badan oo gaadhay 500 qof kadibna ay soo xidhxidheen, Alfred muusan cadayn xiliga Maxkamada Lasaari doono sidoo kale wuxuu ku daray in dadkaasi halkan ay kusoo dhaweeyaan dad horey u deganaa wadanka, weliba wuxuu sheegay in network dadka looga soo kaxeeya Somalia ay soo kaxeeyaan dad somaliya oo iyagu kala yaqaan wadada kana qaataan lacag fara badan, ugu danbeynti wuxuu sheegay Alfred Tibeygana oo ah madax police ka dar es salaam ah in arimahaas oo dhan wax laga qaban doono.
Sidoo kale wasaarada arimaha dibada afhayeen u hadlay ayaa isaguna ku sheegay in dowladu sifeyn doonto dadka sida sharci darada kusoo gala ama sida sharci darada ku degan dalka Tanzania, arintan ayaa walwal fara badan ku abuurtay Somali fara badan oo horey u daganaa halkaasi, dalka Tanzania waxaa ku nool Somali fara badan oo gadhay ilaa iyo 5000 oo qof ganacsi iyo degaanba ku leh, sidaa darteed arintan ayaa ku noqotay arin walwal ku abuurta.
Amiin Yuusuf | Xamar
Ururka Beer-yaqaanada Soomaaliyeed (SAGRA) oo dhawr gobol gaarsiiyey abuurka Salbukada Filsan ... GUJI...
Guddoomiyaha Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah Shiikh Shariif Shiikh Axmed ayaa ku dhawaaqay Maalintii shalay ahayd in dhinacooda ay diyaar u yihiin xabad joojin lagu joojiyo dagaalka qaraar ee maalintii saddexaad ka socda Magaalada Muqdisho ee u dhexeeya Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah iyo Isbahaysiga la magacbaxay la Dagaalanka Argagixisada.
“Culuma’u-diinka, Waxgarad iyo Odoyaal ayaa nala soo xiriiray oo naga dalbaday xabad joojintaasi anaguna waan ka aqbalnay” ayuu yiri Shiikh Shariif oo sheegay in markii horeba fariisimahooda la soo weeraray oo intaa ku daray “aad baan uga xunnahay dhibaatada ku dhaceysa dadka Shacabka ah, waana middaas midda aan u aqbalnay xabad joojintaasi”.
Sidoo kale ninkii uu dagaalka ka bilowday Nuur Xasan Cali (Nuur Dakhle) ayaa isna sheegay in dhiniciisa uu diyaar u yahay heshiis Xabad joojin ah, “Waxaa ila soo xiriiray Odoyaal, Culuma’u-diin iyo Waxgarad oo iga dalbaday in aan xabadda joojiyo si weyn ayaan u soo dhaweeyay una aqbalay” ayuu yiri Nuur Dakhle.
Dagaalka dhexmaray labada dhinac ayaa waxa uu dhaliyay khasaaro aad u ba’an maadaama goobaha lagu dagaalamayo ay yihiin goobo ay ku sugan yihiin dad rayid ah, waxaana shalay la arkayay dad maati ah oo ka soo qaxaya goobaha ay dirirtu ka socoto, waxaana dadka ka muuqday diif iyo darxumo, maadama dadkaasi ay ahaayeen dad markii horeba isaga noolaa duruufo aad u adag.
Maalintii shalay ahayd ayaa Guriga Muuse Suudi ee Degmada Kaaraan waxaa kulan ku yeeshay xubnaha isbahaysiga la dagalanka Argagixisada, waxaana ka qaybgalay rag ay ka mid ahaayeen Max’ed Qanyare Afrax, Max’ed Dheere, Muuse Suudi, Cumar Finish, Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid, Cabdi Nuure Siyaad, C/rashiid Ilqeyte, Cabdi Shukri iyo Ciise Cabdi, ilaa iyo haddana lama faahfaahin waxa looga hadlay kulankaasi balse warar ayaa waxay sheegayaan in kulankaasi uu ahaa mid ay warbixino isku dhaafasanayeen xubnahaasi oo ku saabsan xaaladda Muqdisho, warar kale ayaa waxay sheegayaan in kulankaasi looga halday arrimo la xiriira dagaalka haatan ka socda Deegaanka Sii Sii, waxaana la sheegay in dhinacyadaasi ay isku afgarteen in ay ka qayb-qaataan dagaalkaasi.
Kulamada ay yeelana-yaan xubnaha la dagaalanka Argagixisada ayaa ah kuwo xadidan, maadaama weli dagaalo ay ka socdaan Magaalada Muqdisho, iyadoo maalintii shalay ahyad kooxo gurmad ah oo ka tiran isbahaysiga la dagaalanka Argagixisada lagu helay Isgooska Km4.
Waxaa maalintii shalay ahayd ka furmay Magaalada Baydhabo siminaar loo qabtay Xildhibaanada Baarlamaanka, waxaana soo qaban-qaabiyay Hay’adda AWEBA oo iyadu inta badan gacan siisa Baarlamaanada Adduunka.
Xubno ka tirsan Ha’ad daasi ayaa waxay sheegeen in Baarlamaanada Adduunku uu ka dhexeeyo xiriiro Iyadoo Baarlamaanada Somaaliya looga baahan yahay in ay mar kasta xiriir la sameeyaan Baarlamaa-nadaasi si ay waayo aragnimo uga helaan.
Siminaarkaan oo socon doona labo Maalmood ayaa waxay shalay si aad ah ugu doodeen qaar ka mid ah Xildhibaanada Baarlamanka iyagoo halkaasi ka dhiibanayay Fikradahooda la xiriira arrimaha ka dhexeeya Baarlamaanada waxayna u mahadceliyeen Hay’adda oo ay sheegeen in ay tahay Hay’ad ku taagan in ay taageerto Baarlamaanada Caalamka.
Siminaarkaan ma ahan kii ugu horeeyay ee loo qabtay Xubnaha Barlamaanka, iyadoo maalintii doraad ahayd loo soo gebagabeeyay Siminaar ay soo qaban-qaabisay waxyadda Siyaasada Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf oo haatan booqasho ku jooga wadanka liibiya ayaa la kulmay Hogaamiyaha Wadanka Liibiya Mucamar Al-Qadaafi waxayna isla soo qaadeen arrimo ku aadan Xaaladda Soomaaliya.
C/llaahi Yuusuf ayaa Hogaamiyaha Liibiya waxa uu warbixin ka siiyay Dowladda Federaalka oo uu sheegay in ay wali aysan helin kaalmadii ay u baahneyd ha noqoto dhinaca dib u dhiska iyo dhinaca ammaanka.
C/llaahi Yuusuf ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Federaalka ay u baahan tahay ciidamo shisheeye oo gacan ka siiya dhinaca ammaanka si ay u soo celiyaan amarkii iyo kala dambeyntii, waxa uuna u soo jeediyay Hogaamiyaha Liibiya in uu gacan ka gaysto sidii Soomaaliya lagu keen lahaa ciidmaadaasi, isla markaana dhaqaalaha ku baxaya ciidankaasi uu gacan weyn ka gaysto, waxaana la filayaa in Madaxweynuhu uu gaaro wadanka Yemen kaddib markii uu martiqaad ka helay Hogaamiyaha Wadankaasi oo isagu u ololeeya sidii Qaaradda Afrika ay u midoobi lahayd ayna u yeelan lahayd hal Hogaamiye. [Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya uu ku tegey Liibiya, ka akhri halkan...]
Haddii Banaanka laga helay, miyuusan u baahneyn gacan bini’aadannimo iyo Gargaar... AKHRI...
Maalintii saddexaad ayuu galay dagaalka ka socda Magaalada Muqdisho oo u dhexeeya Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah iyo Isbahaysiga la dagaalanka Aragagixisada, waxa uu dagaalkii shalay ahaa mid aad u qaraaraa oo gaystay khasaaro isugu jira naf iyo maal.
Dagaalkaan oo ku fiday deegaano ay ka mid yihiin Yaqshiid iyo Karaan, ayaa waxaa ilaa iyo haatan ku geeryooday Sideetamaayo qof waxaana ku dhaawac macay 130 qofood oo intooda badan la dhigay Isbitaalada Madiina iyo Keydsaney.
Madaafiic aad u xooga ayaa waxay ku soo dhaceen warshaddii hore ee Baasta Caymista, Xamarbila iyo Suuq Bacaad waxayna geysteen khasaarooyin aad u fara badan oo intooada badan ay ku dhaceen Bulshada Rayidka ah, waxaa weli soo gaaraya labada dhinac baaqyo nabadeed oo looga dalbanayo in ay joojiyaan xabadda, isla markaana wixii khilaaf ah ku xaliyaan wada hadal, waxaana la sheegay in labada dhinac ay aqbaleen baaqyadii inkastoo ay wali dhaceyso xabaddii iyo iska hor imaadyadii.
Labada dhinac ayaa waxaa soo gaaraya gurmadyo ka kala imaanaya Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah iyo Isbahaysiga lagu magacaaboa la dagaalanka Argagixisada iyo soo celinta nabadda.
Dagaalkaan haddii aan si dhaqsi leh looga hortagin waxa uu keenayaa in uu guud ahaan ku faafo Magaalada Muqdisho iyadoo dadweyne fara badan ay ka qaxayaan goobihii dagaaladu ay ka bilowdeen, waxaana arkeysaa Carruur iyo Dad- waayeel ah oo ka cararaya xabadda wiiftada ah ee ay isku ridayaan labada dhinac ee ku dagaalamaya.
Eng. Cali Xasan Bubaale oo ah Ingineer ka tirsan Maraakiibta Mudana la socday Maraakiibta uu gacanta ku hayo Eng. Muunye Siciid Cumar ee SHIFCO, waxaana wax ka weydiinay kooxaha maalmahan ugaarsanaya Maraakiibta Shisheeye iyo arrimo kale oo la xiriira howlaha Maraakibta, isagoo arrintaasi ka hadalayana waxa uu yiri, “Maraakiibta Shisheeye waxay xaq u leeyihiin in ay maraan 200 Mayl oo ah Biyaha Caalamiga ah, meeshaas ma tagi karaan Doomaha Yar yar waayo waxaan gaarsiineyn Shidaalka”, wuxuuna intaa sii raaciyay “Marakiibta waaweyn waxay ka soo gudbiyeen labadaas Boqol oo Mayl oo waxaa la isugu yimid 50-kii Mayl oo ay xaq u lahaayeen Kalluumeysata, Maraakiibtaasi waxa ay dhibaato gaarsiiyeen Doomihii Kalluumeysatada ahaa iyo Shabaagtoodii, marka xaq ayay u leeyihiin in ay la dagaalamaan oo ay qafaashaan, waayo, nin Gurigaagii kuugu yimid si gardaro ah waxa uu mudan yahay in la iska dhiciyo”.
Sawiradii laga qaaday safarkii Madaxweynaha DFKG ee SWEDEN... GUJI...
Eng. Cali Xasan, waxaa kale oo uu sheegay in aan la koontaroolin Maraakiibta ku soo xiraneysa Dekedaha Soomaaliya, isagoo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri “Marabka Shidaalka ah waxa uu leeyahay Lix god ama lix Haamood, waxaa laga yaabaa in labo ka mid ah godadkaasi ay shidaal ku soo shubteen ganacasato, halka kuwa kalana aan la fiirin, waxaana dhici karta in isagoo dekedda taagan uu iska rogo xitaa haddii ay qashan yihiinba, taasoo dhibaato ku ah Bulshada Soomaaliyeed”.
Eng. Cali Xasan waxa uu sheegay in kooxha lagu tilmaamay burcad badeedka ay difaacayaal xeebaha Soomaali-yeed, inkastoo uu ka digay afduubka loo gaysanayo Maraakiibta Ganacsiga kuwaasoo afduubkoodu uu dhibaato hor leh u gaysan karo shacabka Soomaaliyeed.
Maalintii shalay ahayd ayaa Isgooska Km4 ee Magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay iska hor imaad dhex maray kooxo maleeshiyo ah oo halkaasi fariisin ku leh iyo Isbahaysiga la dagaalanka Argagixisada. Iska hor imaadkaasi ayaa waxaa ku dhintay labo ruux, waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo lix kale, iyadoo Gawaaridii Isbahaysiga ay kala go’een oo qaarkood u baxsadeen dhinaca Xaafadda Xamarweyne, waxaana la sheegay in halkaa uu ku qabsaday dagaal kale oo ay ku dhinteen labo ruux.
Dagaallo dhexmaray ciidammada xoreynta iyo kuwa gumaysiga Itoobiya.
Dad uu cadowgu xidhxidhay iyo ciidammo cadowga ka goostay.
Madaxdii mucaaradka Itoobiya oo denbiyo calculus lagu soo oogay.
Shir ka dhacay magaalada Melbourne(Australia) oo aan ka waraysanay Khadar Aaden Cismaan.
Barnaamijkii Aragtida Halgamaaga(Shacabka Ogadenya Qadiyadiisa fahan).
01/05/06 dagaal ayaa ciidammada xoreynta Ogaadeenya iyo kuwa gumaysatada Itoobiya ku dhexmaray Rugle, oo Godey laga xukumo, waxaana cadowga lagaga dilay 13 askari, waxaa sidoo kale lagaga dhaawacay 15 askari.
02/05/06 meel Wardheer iyo Dannood u dhaxaysa waxaa waddada loo galay baabuur ciidammada gumaysiga Itoobiya leeyihiin, waxaana halkaas lagaga dilay 8 askari, 13 kalana waa lagaga dhaawacay.
03/05/06 Afar-irridood, oo degmada Dannood ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 3 askari, 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
04/05/06 Qayla-dhoorrey, oo Godey ka tirsan, dagaal ka dhacay waxaa ciidammada cadowga lagaga dilay 20 askari, 14 kalana waa lagaga dhaawacay.
06/05/06 ciidammada xoreynta Ogaadeenya ayaa waddada u galay baabuur kolonyo ah oo cadowgu leeyahay oo maraysay Babaas, oo u dhexeeya Baabili iyo Jigjiga, waxaana cadowga weerarkaas lagaga dilay 8 askari, 13 kalana waa lagaga dhaawacay.
04/05/06 ciidammada xoreynta Ogaadeenya ayaa magaalada Haar-cad gacanta ku dhigay, waxayna Boolis iyo Dabaqoodhi halkaas fadhiyay kala wareegeen hubkii iyo raadyihii is-gaadhsiinta. Ciidammadaas Booliska iyo Dabaqoodhiga isugu jira ayaa is-dhiibay iyagoon wax caabi ah samaynin markii ay ciidammada xoreynta Ogaadeenya magaalada soo galeen. Ciidammada xoreynta Ogaadeenya ayaa magaalada Haar-cad iskood uga baxay, ka dib markii habayn iyo maalin haysteen.
06/05/06 dagaal mir ah oo lagu qaaday ciidammada gumaysatada Itoobiya ee fadhigoodu yahay magaalada Sagag waxaa loogu gaystay khasaare ba’an oon faahfaahintiisa la haynin.
06/05/06 cutub ka tirsan ciidammada xoreynta Ogaadeenya ayaa waddada u galay baabuur cadowgu leeyahay oo maraysay Kudunbuur, oo Qorraxey ka tirsan, waxayna halkaas ku dileen 9 askari, 11 kalana way ku dhaawaceen.
Dhinaca kale xukuumadda Itoobiya ayaa ciidammo aad u fara badan ku soo daabushay dalka Ogaadeenya. Toddobaadyadii u denbeeyay waxaa Ogaadeenya la keenay ciidamo labo Gaas ah, kuwaasoo uu hooggaaminayo nin Tigre ah. Ciidammadan ayaa loogu talagalay inay sii xoojiyaan cabudhinta iyo cadaadiska dadwaynaha Soomaalida Ogaadeenya ee sida wadarta ah u taageeray halganka hubaysan ee Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogaadeenya ka waddo dalka Ogaadeenya.
Markii ay taariikhdu ahayd 26/04/06 waxay ciidammada gumaysatada Itoobiya ku xidhxidheen magaalada La-helow 6 qof oo shacab ah, waxayna magacyadoodu na soo gaadheen dadka kala ah;
1- Xaliimo Dubbad
2- Cabdi-Bari Kayse iyo
3- Faadumo C/qaadir
20/04/06 waxay ciidammada gumaystada Itoobiya magaalada Fiiq kula wareegeen raashiin loo waday 7 tuulo oo kal duwan. Raashiinkaas waxaa la wareegay ciidammada gumaysatada, waxaana loogu marmarsooday in raashiinkaas Jabhadda loo wado.
Tuulooyinka raashiinkooda lala wareegay waxay kala yihiin;
Basuuro, Saliid, Jeerinka, Aloosane, Maygaag-wayne, Tukale, Bannaan-dayuurad, Haar-galool iyo Cadale.
15/04/06 waxay ciidammada gumaysatadu magaalada Fiiq
ka uruuriyeen Qoryo uu shacabku lahaa. Qaryahaas markii ay uruuriyeen ayay dadwaynihii ka dalbeen inay keenaan dad Qoryahaas qaada, hase yeeshee shacabkii ayaa dalabkaas ku gacan saydhay.
18/04/06 ciidammada gumaysatada Itoobiya ee fadhiya magaalada Fiiq waxaa ka goostay 8 askari, kuwaasoo xagga Erar u goostay iyagoo hubkoodii wata.
15/04/06 waxaa sidoo kale ciidammada gumaysiga ee Fiiq fadhiya ka goostay 15 askari oo dhalashadoodu Oromo tahay, waxayna u baxsadeen dhinaca Qubi.
26/04/06 magaalada La-helow wuxuu dagaal u dhexmaray ciidammada gumaysiga dhexdooda, waxaana la sheegay inay 6 askari iska dileen.
04/05/06 ciidammada gumaysiga Itoobiya waxay tuulada Afar-irridood ku gubeen labo guri oo shacab leeyahay, waxayna boobeen hantidii dadwaynaha ee tuuladaas taallay.
Madaxdii mucaaradka Itoobiya ayaa isniintii la horkeenay maxkamad ku sheeg, waxaana lagu soo oogay denbiyo waawayn oo kala ah khiyaamo qaran, xasuuq iyo isku day afgenbi. Madaxdan ayaa lagu eedeeyay inay doonayaan inay fuliyaan kuwo la mid ah bannaanbaxyadii hannaanka dimuqraadiyada lagu raadinayay ee laga fuliyay dalal ku yaalla Bariga Qaaradda Yurub.
Waxaa maxkamad ku sheegtan la horkeenay 75 qof oo isugu jira madaxdii mucaaradka, suxufiyiin iyo dad xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa, waxaana dhammaantood lagu soo oogay inay gaysteen khiyaamo qaran, isla markaana doonayeen inay dalka qalalaasa ka abuuraan oo xasuuq gaystaan.
Dadkan 75-ka ah waxaa denbiyadan lagu soo eedeeyay bishii Disember eek al hore, ka dib markii ay dalka Itoobiya oo dhan ka dhaceen labo bannaanbax oo waawayn, kuwaasoo ay xukuumadda Meles Zenawi awood kala hortagtay, kuna dishay dad aad u fara badan, qaar badan oo kalana ay xabsiyada ka buuxisay.
Dadka bannaanbaxyada iyo kacdoonka sameeyay ayaa ka xanaaqay musuqmaasuqii ay xukuumadda Zenawi ku samaysay doorasho ku sheegtii dalka laga hirgaliyay.
Maxkamadda dadkan ayaa isniintii ka billaabatay meel 20 km dhinaca woqooyi ka jirta magaalada Addis Ababa, oo si wayn loo ilaalinayay.
09 May 2006.
Radio Xoriyo waxaad ka dhegaysan kartaa Mawjadda 25 MB ee dhererkeedu yahay 11865 KHZ,iyo internetka Radioxoriyo.com,Ogaden.com Maalmaha Talaadada iyo Jimcaha 7: 30PM waqtiga Afrikada Bari
Madaxweyne C/laahi yuusuf oo Booqasho ku jooga Dalka Liibya
Wafti uu hogaaminayo madaxweynaha DFKMG ayaa galabnimadii Isniinta soo garey Tripoli ee.. Guji.. May 9
Warar ku saabsan Dagaalaka ka socda Muqdisho..
»Baaqyo soo gaaraya kooxaha ku dagalamaya Muqdisho..
»Midowga Maxaakiimta Islaamiga ah oo si rasmi ah ugu..
»Max’ed Dheere oo Xabsiga u taxaabay Ciidamo ka tirsan..
»Suldaan Xaaji Abuukar “Waxaan u soo jeedinayaa Kooxaha..
»Maalinta Bisha Cas iyo Laanqayrta Cas oo laga xusay Dalka
»Dowladda Mareykanka iyo Itoobiya oo iska kaashanaya..
Wararka oo dhan ka akhri halkan... Guji... May 9
» WARBIXIN KOOBAN OO KU SAABSAN ISBITAALKA DAYNIILE
Ogeysiis ku jeeda Soomaalida Minnesota (Midtown Exchange/ Global Market)
Soomaalida Minnesota waxaa la ogeysiinayaa in agagaarka Masaajidka cusub ee la gaday ee Abubakar al sidiiq agtiisa laga dhisay guryo la kireysto weliba dadka dan yarta ah qayb loogu talo galay. Gurigaas oo aad u weyn waxaa uu ku yaalaa 2929 Chicago Ave South Minneapolis Gurigan waxaa uu ku yaalaa meel u dhaxayso labo masaajid kuwaas oo kala ah Masji Abubakar iyo Masjid al Iimaan. Waxaa kale oo aan ka dheerayn masaajidyada Umatu Muxammad, Al-towxiid, iyo masjid Cumar iyo labada suuq ee aadka u waaweyn ee Soomaaliyeed Karmal Mall iyo Mallka 24ka.
Gurigan dib u habaynta lagu sameeyay waxaa la yiraahdaa Midtown Exchange Apartment. Ka dib markii la arkay horumarka iyo soo noolaynta ay immigrants ku sameeyeen Lake Street muhaajiriintaas oo u badan Latino iyo Somali ayaa ganacsato kaashanaysa shirkadda weyn ee Allina iyo madaxda magaalda Minneapolis iyo Congressmenka Minnesota oo ay ka mid yihiin Senator Coleman, Senator Dayton, Congressman Sabo waxaa suurtogal noqotay in Midtown Echange dib loo dhiso weliba Global Market uu noqon doona suuq caalami ah marka la furo.
Global Market waxaa talada lagu dhisay wax ka lahaa nin Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hussein Samatar oo ah madaxa hayada African Development Center. Degaankan waa mid afka Soomaaliga lagu qoray meelkasta maalinta furitaanka Amiin Caamir ayaa ku soo bandhigi doonaa farshaxan Soomaaliyeed. Waxaa kale oo ka soo qaybgeli doona madaxda gobolka iyo dadweyne badan.
Midtown Exchange & Global Market.
June 3, 2006 saacada markay tahay 10:00 subaxnimo ilaa 4:00 galabnimo
Kala xiriir Guryaha Midtown Echange 612-823-1104
Global Market business African Development Center 612-333-4772
Waxaa soo tebiyey: Maxamuud Wardheere